नगरबासी हुनुको आभाष दिलाऊ
By vijayafm on	 October 31, 2017 सम्पादकीय
गैँडाकोट नगरपालिकाको विकट क्षेत्र ‘हर्दि’ जहाँका नागरिक आफू नगरबासी भएको आभाष गर्दैनन् । तीन वर्ष अघि गैँडाकोट नगरपालिका बनेपछि हर्दिका नागरिक नगरबासी त भए तर उनिहरुले अझैसम्म पनि आफू नगरबासी भएको महशुस गर्दैनन् । सामान्य भौतिक पूर्वाधारका कुनै पनि पक्ष पूरा नभएको यस क्षेत्रका मानिस शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विजुली, सुरक्षा हरेक दृष्टिकोणले पछि परेका छन्, हर्दि गैँडाकोट क्षेत्रकै विकट क्षेत्रको रुपमा परिचित समेत बन्दै गएको छ । हर्दि मात्र होइन गैँडाकोट नगरपालिकाको वाड नं. ३ को हर्दि, केलादी, ढोडेनी सबै सामान्य आधारभूत पूर्वाधारबाट बन्चित भएको छ ।
हर्दिका जनताका लागि शिक्षाका लागि न त राम्रो विद्यालय छ, भएपनि विद्यालयका शिक्षक वषौँदेखि विना तलब पढाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । भोको पेटले कस्तो शिक्षा दिइरहेको होला ? न त स्वास्थ्य चौकी छ, न त सुरक्षाका लागि प्रहरी पोष्ट ? विरामी हुँदा सिटामोलको समेत देख्न नपाउने हर्दिको पीडा खै कसले बुझ्यो र आजसम्म । तिनै गरिब जनतालाई भ¥याङ बनाएर चुनावबाट कति नेतृत्वले जित हासिल गरे । तर तीनीहरुले औँलामा कालो मसि शिवाय केही प्राप्त गर्न सकेनन् । उपचारकै लागि हर्दिका जनता आफ्नै नगरको स्वास्थ्य चौकीमा आउने करिब डेढघण्टाको बाटो हिँड्नुपर्दछ, त्यो पनि जंगलै जंगलको बाटो हिँड्नु पर्दछ । यदि चितवन जाने हो भने पनि आफ्नै जिल्ला नवलपरासी, तनहुँ हुँदै चितवन जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र होइन् बजारीकरणको पनि उस्तै समस्या छ । घरमा उब्जाएका तरकारी, फलफुल, सालका पात, पीँडालु तरुल बेचेर घर खर्च जोहो गर्ने हर्दिका जनता घण्टौँ जंगलको बाटो भएर बजार पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । बर्षायाममा हिलो बाटोकाकारण उस्तै सास्ती बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । समस्या यति मात्रै होइन, यस क्षेत्रका जनता बषौँदेखि विजुली बत्ती नहुँदा अध्याँरो र टुकीको भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै कहाली लाग्दो रहेको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिकाको वाड नं. ३ को एक क्षेत्र हर्दि जहाँका नागरिकलाई नगरबासी हुनुको बोध गराउनु नगरपालिकाको दायित्व हो । सुरक्षाका लागि हप्ताको एक दिन भएपनि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट घुम्ति टोली जाने, शिक्षाका लागि नगरले त्यहाँका विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार पु¥याउन सकिन्छ, साथमा केही निजि शिक्षकका लागि पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सामुदायिक वनले पनि हर्दिका विद्यालयका लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ । सबै भन्दा बढि समस्या भएको स्वास्थ्यका लागि हप्ताको एक दिन गैँडाकोट स्वास्थ्य चौकीबाट निशुल्क औषधी सहित स्वास्थ्य कर्मी घुम्ति शिविर सहित जान सकिने व्यवस्था मिलाएमा सबै भन्दा श्रेयस्कर हुने छ । नगरबासी नहुनुको महसुस गरेको हर्दिका जनताका लागि केही राहत मशसुस हुने छ ।